ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်အရာကိုရာသီခွင်သင်္ကေတပြခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွင်ဝတ်ဆင်ရန်
သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်သွားသည့်အခါ, သင်တို့ကိုဖြစ်နိုင်အဖြစ်မကြာမီခင်ဗျားကလုံခြုံပါတယ်အဖြစ်စဉ်းစားပထမဦးဆုံးအရာ, "အဘယ်သို့ငါဝတ်ဆင်ဖို့ငါသွားရ၏?!"ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး, ဒါကြောင့်သင်အထင်ရောက်ပထမဦးဆုံးအမှုအရာတစ်ခု. ကိုယ်တော်သင်ဝတ်ဆင်ဘာအဆင်ပြေဖြစ်ချင်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်သင်တို့နှင့်အတူအထွက်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှားယွင်းစေမသေချာစေချင်, သူတို့သည်သင့်ဆွဲဆောင်မှုတွေ့ရသော. အချိန်လုံးသင်အပေါ်သူတို့၏မျက်စိကိုစောင့်ရှောက်ချင်သူတို့ရဲ့ရာသီခွင်အောက်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးနှင့်သင်ဝတ်ဆင်နိုင်သောအရာကိုအတွေးအခေါ်များရရှာမည်.
သင့်ရဲ့ Aries ရက်စွဲကိုမီးနိမိတ်လက္ခဏာတို့သည် fieriest ဖြစ်ပါသည်, သောသူတို့အနီအရောင်ကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်ကို. အနီရောင် သာ. တောက်ပပြီးတက်ကြွသော, ပိုကောင်း. သူတို့ကလည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်မြင်ချင်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏အကောင်းဆုံးအပိုင်း accentuates ကြောင့်အဝတ်ကိုဝတ်ဆင်. သင်ကအကြီးအခန္ဓာကိုယ်ရှိပါက, သင်ရှိသည် tightest အဝတ်ကိုသွား. သူတို့သည်သင့်စူပါပူချင်တယ်.
သင်သည် Taurus ရက်စွဲလက်တွေ့ကျတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလက္ခဏာသက်သေဖြစ်, ဒါကြောင့်သူတို့ရိုးရာခါးပန်းကို၎င်းပိုနှစ်သက်လေ့. ပြပွဲမှအရေပြားတစ်ဧရိယာ Pick, နှင့်ဖုံးလွှမ်းရာကြွင်းလေသမျှတို့ကိုစောင့်ရှောက်. မိတ်ကပ်သဘာဝရှာဖွေနေဖြစ်သင့်, နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာအဆင်းလှသောကျောက်အပြည့်အဝရှိသင့်. ဒီနိမိတ်လက္ခဏာသဘာဝတွင်ဘုံဖြစ်ကြောင်းအဆင်းအရောင်ကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်သည်, ဆွံ့အအစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အညိုရောင်တူမြေကြီးပေါ်မှာအဆင်းအရောင်,. ပိုမို. သင်တစ်ဦးသည်မြေကြီးဘုရားသည် / နတ်သမီးအဖြစ်ကိုဖြတ်ပြီးလာ, ပိုကောင်း.
သင့်ရဲ့ Gemini ရက်စွဲအဲဒါကပျော်စေပျက်စေသဘောနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည်, ဒါကြောင့်ချစ်စရာတစ်ခုခုမှာစားဆင်ယင်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ခေတ်မှီ. လေနိမိတ်လက္ခဏာအဖြစ်, သူတို့ဘာနဲ့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်မဖွင်. သူတို့ကကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့ဥပဓိရုပ်ကိုဖြစ်စေနိုင်, ဒါကြောင့်သူတို့ကလေးတွေ / ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်ခြင်း၏သူတို့ကိုသတိပေးသောအရာများကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်နိုင်ပါသည်, plaid အဝတ်နှင့် varsity အကျီနဲ့တူ. ပြောင်လက်တောက်ပသောဝတ်ဆင်ထားစမ်းကြည့်ပါ, သူတို့စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းပျော်စရာအရောင်များကို.
သင့်ရဲ့ကင်ဆာရက်စွဲသက်သာခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာသည်, ဒါကြောင့်သင်လည်းချည်နှောင်တစုံတခုကိုမျှော်ဝတ်စားဆင်ယင်ရန်မလိုပါ, အရမ်းမြင့်မားရ​​ောဂါကိုငြိမ်းစေဝတ်ဆင်, သင်နှင့်အတူ fidgeting စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်တောင်ဒါမှမဟုတ်လည်စည်းပေါ်တွင်တင်. သင်ဝတ်ဆင်ထားချင်တာလဲဆိုတာအတွက်လုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်, သောသူတို့အားဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်. ပြောင်လက်တောက်ပသောအရောင်များကိုရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ, သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှယ့်ကိုရိုင်းင်ထွက်ရှိသွားသူတို့ကိုခြောက်လှနိုင်ကြောင်းကို.
သင့်ရဲ့ Leo ရက်စွဲသူတို့အခန်းတွင်အပူပြင်းဆုံးနေ့စွဲရှိသည်တူခံစားစေလိုသည်, တဦးကိုလူတိုင်းအပေါ်မှာသူတို့မျက်စိရှိတယ်, ဒါကြောင့်တက် glam. သူတို့ကသင်တတ်နိုင်သလောက်အဖြစ်အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေကြည့်ရှုချင်တယ်. သင်သည်အပင် gaudy / tacky borderline နိုင်. ကျောက်မျက်အပေါ်အလွှာသည် – သာ. bling, ပိုကောင်း. ဒါကြောင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်ကြောင့်သူတို့သည်အနီရောင်ကိုကြိုက်တယ်, နှင့်ရွှေနှင့်မောင်းသောအထည်ကိုသူတို့မင်းမျိုးမင်းနွယ်၏အရောင်င်ကတည်းက.
သင့်ရဲ့ Virgo ရက်စွဲဒီဇိုင်နာအဝတ်အစားများသို့မဟုတ်လက်ကိုင်အိတ်ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်အကြောင်းကိုများများစားစားဂရုမထားဘူး. သူတို့ကအကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုသင်တို့သည်ကောင်းသောအနံ့ခြင်းဖြစ်သည်င်, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြိုတင်ရေချိုးခန်းကိုယူ, နှင့်အလွန်အကျွံ hairspra​​y ဝတ်ဆင်ကြသည်မဟုတ်, မိတ်ကပ်, ဒါမှမဟုတ်အရုပ်နဲ့တူကြည့်ရှု. တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးကိုဤနိမိတ်လက္ခဏာကိုနံပါတ်တစ်ဖြစ်. ရိုးရှင်းသင့်မတ်မတ် Keep, ပေါ့ပါးသွက်, နှင့်ကြားနေအရောင်များကိုကပ်. သူတို့ကကိုအလွယ်တကူလွှမ်းင်, ဒါကြောင့်တောက်ပသောအရောင်များကိုသူတို့ကိုစိုးရိမ်ပူပန်စေ.
သင့်ရဲ့ Libra ရက်စွဲရှိသမျှတို့သည်အရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအများဆုံးဖက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကထစ်ကထကန်ရှိသည်. သူတို့အားဒီဇိုင်နာအဝတ်ကိုဆွဲထုတ်အတူတကွအေးမြသောသွင်းထား, ခေတ်မှီကြည့်. ဒီလက္ခဏာကိုအနုပညာစည်းကမ်းချက်, သူတို့ဒါကြောင့်ဖက်ရှင်ပါပဲဘာကြောင့်အရာဖြစ်ပါသည်, သူတို့သည်သင့်အတူတကွနှင့်ခမ်းနားကြီးကျယ်လှသောကြည့်ရှုရန်မျှော်လင့်. သူတို့ကကျောက်မျက်တန်ချိန်ကြိုက်, ပစ္စည်းများ, တင့်တယ်သောရတနာ, ထိုသို့မဟုတ်ဘဲအလွန်အကျွံ.
သင့်ရဲ့ Scorpio နေ့စွဲမှောင်မိုက်ကိုအုပ်ချုပ်သောလက္ခဏာသက်သေဖြစ်, ဒါကြောင့်မှောင်မိုက်အရောင်များသွား. သင်ဦးခေါင်း-To-toe အနက်ရောင်ကိုချွတ်ဆွဲယူနိုင်လျှင်, လုပ်သာလုပ်. သူတို့သည်သင့်ကိုတက်ဖုံးလွှမ်းပေမယ့်အချုပ်အနှောင်ကိုသူတို့အားသတိပေးနေပါတယ်ကြောင်းတင်းကျပ်စွာသောအဝတ်ကိုဝတ်ကြိုက် (ထိုနိမိတ်ထိန်းချုပ်မှုကိစ္စရပ်များရှိပါတယ်). တစ်ဦးသဲမျက်စိအတွက် Go, မျက်စိသည်စိတ်ဝိညာဉ်၌ပြ​​တင်းပေါက်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ထက်ထက်သန်သန်သင်၏ဥစ္စာသို့စေ့စေ့ကြည့်ရှုချင်သောကိုသတိရ.
သင့်ရဲ့ Sagittarius အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အများအားဖြင့်ကဖက်ရှင်နှင့်အဝတ်ထဲသို့ကိုယ်တိုင်မဖြစ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သင်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းဖို့လိုပါ. သူတို့ကပြောင်လက်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းနဲ့ကပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ထိုမေတ္တာအဝတ်စသို့မဟုတ်လက်ဝတ်ရတနာကြိုက်. ခရီးသွားလာနေစဉ်သင်ကရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်, သို့မဟုတ်ပါကအချို့သောထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အပိုင်သို့ကြွလာတော်, ပေါ်ပစ်လိုက်နဲ့ကစိတ်ဝင်စားဖို့စကားပြောဆိုမှု၏ရင်းမြစ်ဖြစ်ကုန်အံ့. သူတို့ဟာ * သင်စိတ်ဝင်စားဖို့ * ကိုရှာဖွေတက်အဆုံးသတ်ရပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့ capricorn ရက်စွဲရှိသမျှတို့သည်အရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအများဆုံးအစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အစဉ်အလာမတ်မတ်စွဲစွဲမြဲမြဲ. Ladies, သင့်ရဲ့ LBD ဆွဲထုတ်; Genting, ကဝတ်စုံနှင့်လည်စည်းကိုဖမ်း. ပြောင်လက်တောက်ပသောအရောင်အဆင်းမှပယ်ရှား Stay, မှောင်ကြားနေရေးဝါဒကိုစွဲစွဲမြဲမြဲ, အထူးသဖြင့်အညိုရောင်နှင့်အမည်းရောင်. သင်ကနိုင်ငံရေးအရ gala သွားဝတ်စားဆင်ယင်င့်နည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ, ကြောင်းကို၎င်းသင်တို့ကိုသူတို့သည်သင့်ကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဘယ်လိုကောင်းတစ်ခုအိုင်ဒီယာပေးလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့သုံးလုံးအနီးကပ်ရက်စွဲရှိသမျှတို့သည်အရာသီခွင်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအများဆုံးဖွယ်ရာတစ်မူထူးသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကြည့်ရှုဆော့ကစားအခမဲ့ခံစားရနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုကြိုးစား. အပြာရောင်သို့မဟုတ်ပန်းရောင်သင့်ဆံပင်ဆိုးဆေး, ဂုဏ်ယူစွာကြောင့်မျက်ခုံးသို့မဟုတ်ဝမ်းထဲခလုတ်ကို Pierce tout, သို့မဟုတ်သင့်ပြန်လည်အသုံးပြုဆော်ဒါပုလင်းလက်ဝတ်ရတနာဝတ်ဆင်. သူတို့ဟာလက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. ဂရုမစိုက်ပါဘူး, အနာဂတ်တွင်သူများကိုသာ, ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာအတွက်ဘာနှင့်အတူမလိုက်မသွားဘူး.
သင့်ရဲ့ Pisces ရက်စွဲအဆုံးစွန်ရင်ခုန်စရာဖြစ်, ဒါကြောင့်သင်ကအချစ်ဇာတ်လမ်းတ္ထုတစ်ပုဒ်၏မျက်နှာဖုံးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာရုပ်ရှင်ထဲတွင်တစ်ခုမတ်မတ်မြင်ဘူးပါဘူးဆိုရင်, အလုပ်လုပ်နိုင်. သူတို့ဟာ ruffles ကြိုက်, စီးဆင်းမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူကိုအပိုင်းပိုင်း, ဇာ, သင်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏လျှင်, ပင်ပိုကောင်း. သူတို့ဟာသော်လည်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးကသိမ်းထားတာစိတ်ထဲမထားပါဘူး, နှင့်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်ရှပ်အင်္ကျီတစ်ကောင်းတဲ့လုံလောက်နိုင်. သူတို့အကြိုက်ဆုံးအရောင်အဆင်း pastels များမှာ.